मेकअप नगरी पनि सुन्दर देखिन सकिन्छ ! - Everest Talk
मेकअप नगरी पनि सुन्दर देखिन सकिन्छ !1 min read
२०७६, २३ माघ बिहीबार १३:०९
in एभरेष्ट टक विशेष, खबर, टिप्स
सौन्दर्य दुई खालको हुन्छ, भित्री र बाहिरी । भित्री सौन्दर्यले विचार र भावनासँग सम्बन्ध राख्छ भने बाहिरीले आवरणसँग । मानिसहरूको पहिलो नजरमा पर्ने भनेको आवरण नै हो । आवरणले नै मान्छेलाई आकर्षित गर्छ । यो व्यक्तित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ । मेकअपबाट आयातीत सुन्दरतालाई भन्दा विना मेकअपको सुन्दरतामा मानिसको विशेष रुचि तथा आकर्षण रहने गरेको छ ।
सुन्दर देखिन मेकअप नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यदि तपाईँ आफ्नो दैनिकीमा निम्न कुरालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने मेकअप नगरी पनि सुन्दर देखिन सक्नुहुन्छ ।
प्रशस्त पानी पिउनेः
पानी धेरै रोगको निवारण हो । यसले सुन्दरता बढाउन पनि मद्दत गर्छ । प्रशस्त पानी पिएर शरीरलाई हाइड्रेट राख्नुपर्छ । यसले शरीरमा रहेको विषाक्त वस्तुलाई हटाउनुका साथै अनुहारमा आउने चाउरीपनालाई पनि घटाउँछ ।
छालालाई उज्यालो र चमकिलो बनाउने खाने कुरा खानेः
अनुहारलाई स्वास्थ्य र चम्किलो बनाउन खानाको भूमिका पनि विशेष रहन्छ । जसका लागि मौसमी फलफूल, सागसब्जी, फर्सी, ओखरका साथै भिटामिन सीयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । त्यस्तै अण्डा, सिमी, दाल, पनिरलगायत उच्च प्रोटिनयुक्त खाने कुरा खानु पर्छ ।
पटकपटक अनुहार धुनेः
जति समय मेकअपमा खर्च गरिन्छ त्यति समय अनुहारको हेरचाहमा लाउन सके पनि सुन्दर देखिन सकिन्छ । स्तरीय फेसवासको प्रयोग गरेर दिनमा दुईदेखि चार पटकसम्म अनुहार धोए सुन्दरता बढ्छ । तर धेरै सुन्दर हुने आशामा धेरै मुख धोए छाला सुक्खा र फुस्रो बन्छ ।
स्किनसम्बन्धी चिकित्सकको सल्लाहामा छालाको प्रकृति अनुसार मोस्चराइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । रातको समयमा छालालाई सुक्खा हुनबाट बचाउन पौष्टिक मोस्चराजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
निद्रा, ध्यान र योगः
छालालाई स्वास्थ्य राख्न निद्रा पुराउनु आवश्यक छ । निद्राको साथै ध्यान र योगले समेत छालामा चमक बढाउनका साथै चाउरीपना घटाउन मद्दत गर्दछ ।
“आर्ट अफ लिभिङ नेपाल’ले अनलाइनबाट बाल दिवस मनाउने
२०७७, २८ भाद्र आईतवार २०:१८
उद्योगी विनोद चौधरी पनि कोरोना संक्रमित
२०७७, १२ भाद्र शुक्रबार १३:४५
टिकटक र अमेरिकाको बिबाद नयाँ मोडमा, सिइओले दिए राजिनामा
२०७७, ११ भाद्र बिहीबार १९:३०
निषेधाज्ञा भदौ १५ सम्म बढ्ने सम्भावना
२०७७, ८ भाद्र सोमबार १८:३५
बुधबार रातिदेखि काठमाडौंमा एक साता निषेधाज्ञा
२०७७, २ भाद्र मंगलवार २०:०८
यौन सपना किन देखिन्छ ? यस्ता छन् कारण
२०७७, २९ श्रावण बिहीबार १९:४०
सी चिनफिङ सपना र हाम्रो पाठ
Share 879 Tweet 102
पितृ देवो भव!
समाजले बुझ्न नचाहेकै हो बाल मनोविज्ञान ?
Share 83 Tweet 42
घरमै यसरी बनाउन सकिन्छ लालमोहन
Share 178 Tweet 63